सिरि**न्ज घटनामा परेका निर्दोष शिक्षक यसो भन्छ्न, (त्यो दिनको घटनाको नालिबेलि) -
सिरि**न्ज घटनामा परेका निर्दोष शिक्षक यसो भन्छ्न, (त्यो दिनको घटनाको नालिबेलि)
२५ असार २०७६, बुधबार ०९:५८ July 10, 2019 GS Nepal0Comments
कहिलेकाहीँ मान्छे अनाहकमै कानुनी परिबन्धमा फस्छ। यस्तै परिबन्धमा परे, स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका-१३ का ३४ वर्षीय शिक्षक खगेन्द्र पाठक।
सोमबार धुलिखेल अस्पतालमा बिरामी आफन्त भेट्न हिँडेका पाठक बीचबाटोमै एक महिलालाई ‘सिरिन्ज आक्रमण’ गरेको आरोपमा मुछिए।
घटनाको अनुसन्धान नै हुन नपाई बसका यात्रुहरूले उनीमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार गरे। प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो।
पाठकले काभ्रे प्रहरीसमक्ष आफूलाई निर्दोष साबित गराउन एक दिन पूरापूर संघर्ष गर्नुपर्‍यो। अन्तत: मंगलबार प्रहरीले उनलाई निर्दोष भन्दै ‘सम्मानपूर्वक’ छाडेको छ।
कसरी भयो यो घटना? निर्दोष पाठक कसरी मुछिए?
हामीले यस सम्बन्धमा मंगलबार पाठकसँग कुराकानी गर्यौं।
उनी काठमाडौं आएको तीन साता भएको थियो। वालिङ-१३, खानीडाँडाको श्री सरस्वती उच्च माविमा पढाइरहेका पाठक लोकसेवाको प्रारम्भिक सहायक पदका लागि जाँच दिन असार ६ गते काठमाडौं आएका थिए।
सुन्धारामा दाइ नाता पर्नेको गेस्ट हाउस थियो। उनी त्यहीँ बस्थे। अचानक धुलिखेल अस्पतालमा ठूलीआमाका छोराको अपरेसन छ भन्ने खबर पाएपछि सोमबार धुलिखेल हिँडे।
बनेपामा केही समय गाडी रोकियो। यात्रु चढ्ने-ओर्लिने क्रम जारी थियो। उनी बसेको सिटअगाडि एक जना युवती थिइन्। ती युवतीसँगै एक जना महिला पनि थिइन्। उनीहरूबीच केही अगाडिदेखि काठमाडौंमा पछिल्लो समय हल्ला चलेको ‘सिरिन्ज आक्रमण’ बारे कुराकानी भइरहेको थियो।
‘ती महिला को थिइन् थाहा भएन, न युवतीकै विषयमा मलाई थाहा भयो,’ पाठकले सेतोपाटीसँग भने, ‘अचानक त्यही कुरा चलिरहँदा मलाई युवतीले सिरिन्ज घोचेको आरोप लगाउनुभयो।’
ती युवतीले आफूमाथि ‘सिरिन्ज आक्रमण भयो’ भन्दै पछाडि फर्केर पाठकतिर इसारा गरिन्।
युवतीले पाठकलाई बोल्ने मौकै नदिई एकोहोरो आरोप लगाएपछि बसको माहोल बिग्रियो। आफूमाथि अनाहक लान्छना लागेपछि पाठक बनेपामै ओर्लिन खोजे। तर, यात्रुको भीडले उनलाई घेरिहाल्यो।
उनी ओर्लिन नपाउँदै सबैले हातपात गरे।
‘त्यत्रो भीडमा म एक्लो थिएँ,’ पाठकले भने, ‘त्यहाँ मेरो कुरा सुन्ने कोही थिएन।’
हातपात र मुक्का बजारिएकै बखत गाडीको ढोकाबाट निस्किएर उनले गुहारे, ‘मलाई बचाउनुहोस्।’
भीडको बीचमा वरिपरिका कोही उनलाई बचाउन अघि सरेनन्। ‘मैले हैन हैन भनिरहेको थिएँ, तर आक्रमण रोकिएन, ज्यान जोगाउनै मुश्किल भयो, प्रहरी आएर मलाई उद्धार गर्‍यो,’ पाठकले भने।
प्रहरीले उनलाई भीडबाट छुटाएर कार्यालयतिर लग्यो। केही बेर इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपामा बसका यात्रु र स्थानीयले घेरा हाले। भीड शान्त भएपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे लगियो।
त्यसपछि पाठकले कानुनी परिबन्ध झेल्न थाले। उनीमाथि सोधपुछ सुरू भयो। ‘किन सिरिन्ज हानेको’ भन्दै एकोहोरो प्रश्न गरियो।
‘मैले होइन, होइन भनेर प्रतिवाद गरिरहेँ, तर प्रहरीले छाडेन। ती युवती पनि प्रहरी कार्यालयमै थिइन्। उनले यही मान्छे हो भनेर किटान गरिन्,’ पाठकले भने, ‘उनले बिनासित्ति किन त्यस्तो आरोप लगाइन् भनेर म आश्चर्यमा थिएँ, त्यसमाथि सिरिन्ज भनेपछि प्रहरीले केरकार गर्न थाल्यो।’
यति हुँदाहुँदै प्रहरी समयमै आइपुगेकाले ‘भीडको शिकार हुनबाट जोगिएको’ उनी बताउँछन्।
‘म के उद्देश्यले हिँडेको थिएँ, बाटोमा अर्कै भयो। न मैले आफन्त भेट्न पाएँ, न कसैको सहानुभूति पाएँ। मलाई सिरिन्ज आक्रमणकारी भनी मिडियामा समाचार आएछ, असाध्यै दु:ख लाग्यो,’ उनले भने।
अनुसन्धानबाट ‘सिरिन्ज आक्रमण’ नभएको निश्चित भएपछि काभ्रे प्रहरीले मंगलबार साँझ पाठकलाई रिहा गरेको छ।
पाठक कसरी निर्दोष सावित भए त?
प्रहरीले सिरिन्ज प्रहार भए/नभएको यकिन गर्न ती युवतीलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु पठाइएको थियो। अस्पतालले जाँच गरेर सिरिन्ज प्रहार नभएको यकिन गरेपछि प्रहरीले पाठकलाई सम्मानपूर्वक रिहा गरेको हो।
ती युवतीले पनि प्रहरीसामु आफूले निर्दोष मान्छेलाई आक्षेप लगाएको बयान दिएकी छन्। पाठकले उनको बयानलाई ‘सम्मान’ गरेपछि घटनाले ‘मिलापत्र’ को रूप लिएको छ।
‘कहिलेकाहीँ भीडको आवाज सुन्न प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, उहाँमाथि पनि त्यही भयो,’ काभ्रेका प्रहरी उपरीक्षक जयराज सापकोटा भन्छन्, ‘समयमै हामीले भीड हटाउन नसकेका भए उहाँको ज्यानमै तलमाथि हुन सक्थ्यो।’
यो प्रकरणमा प्रहरीले विवेक पुर्‍याएर पाठकलाई न्याय दिलाएको सापकोटाले बताए।
न्यायिक प्रक्रियाको पहिलो चरण प्रहरीबाट सुरु हुन्छ। उसले मुद्दा अनुसन्धानको अन्तिम चरण पार गरेपछि मुद्दा न्यायालय लग्छ। यदाकदा प्रहरी पनि भीडको पछि लाग्दा मुद्दाको प्रक्रियामा निर्दोषहरू पनि फस्छन्।
अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले कुन हदसम्मको अपराधमा कसलाई कति अनुसन्धान बढाउने वा उन्मुक्ति दिनपर्ने कसुरमा छाड्ने भन्ने तजबिजी अधिकारी उसैसँग हुन्छ।
‘कसैमाथि आरोप लाग्यो भन्दैमा हामीले उहाँमाथि गैरकानुनी तवरले कारबाही गर्न हुँदैन, हामीले यो धर्म निर्वाह गरेका छौं,’ सापकोटाले भने, ‘निर्दोष व्यक्तिलाई स-सम्मान रिहा गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्‍यौं।’
सापकोटाले निर्दोष व्यक्तिको नाम सार्वजनिक भएकोमा त्रुटि भएको भन्दै आत्मलोचना पनि गरे।
ती युवतीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने टेकुका डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार उनको शरीरमा सिरिन्ज घोचिएको दाग भेटाउन सकिएन। उनको रगत परीक्षण भने गरिएको छ।
‘अहिले धेरैजसो मान्छे जीउमा चसक्क हुनेबित्तिकै सिरिन्ज आक्रमण भएको हो कि भनेर डराउँछन्, उहाँ (युवती) सँग मैले लामो कुराकानी गरेँ, उहाँमा पनि मनोवैज्ञानिक त्रास रहेछ,’ डा. पुनले भने।
उनका अनुसार सिरिन्ज घोप्दा शरीरबाट रगत आउँछ। राजधानीमा ‘सिरिन्ज’ को हल्ला चलेपछि टेकुमा मान्छेहरू परीक्षण गराउन आउने क्रम बढेको छ। त्यसरी आएकामध्ये धेरैजसोमा ‘सिरिन्ज’ आक्रमणको दाग देखिँदैन।
‘सिरिन्जको मनोवैज्ञानिक त्रास छ भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ पुनले भने, ‘यस्तोमा निकै संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ।’
कसैले नदेखिकन वा शंकाकै भरमा कसैमाथि औंला उठाउँदा त्यसबाट कस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने पाठकको घटनाले नै देखाएको छ।
← छवि र शिल्पाको सम्बन्ध बिग्रीएकै अबस्थामा रेखा थापाले आफ्नो बिबाह बारे गरिन यस्तो खुलाशा,
शुभ बिहानि💘💘आज मिति २०७६ साल असार २६ गते बिहिवार तपाईंको राशी अनुसार आजको राशिफल यस्तो हुनेछ, राशिफल पढी शेयर गर्नुहोस । →
चिनमा धमाधम चर्चहरु भत्काउन थाले पछि, नेपाली कृश्चियन हरु त्रसित, नेपालमा नि भत्काउने त हैन?
१२ माघ २०७५, शनिबार ०५:१९ GS Nepal 0
नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा लिएर महिला भन्दा पुरुष ,जिल्ला अदालत धाउन थाले, पूरा हेरि कमेन्ट गर्नुहोला।
२५ माघ २०७५, शुक्रबार ०८:०२ GS Nepal 0
पानीमा भिज्दै बाजुराको अनाथ आश्रममा पुगे माग्ने बुढा , पूरा हेरि शेयर गर्नुहोला।
१ फाल्गुन २०७५, बुधबार १२:४९ GS Nepal 0